Jecha ( Ingl: word) jechuun immoo namnni tokko yeroo dubbatu yookaan barreessu namnni biraa dhagayee (dubbisee) yaada tokko kan ittiin qalbeefachuu danda'u jechu dha.
Afaan Oromo qube "Laatini" digdamii-ja fi qube "cimdii" shan itti fayyadama. Qube cimdii kan jennu quboota lama addaan ba'u kan hin dandeenye, sagalee biraa kennuu dhaaf akka qube tokkotitti kan lakkaawwamani dha.
Jara kana keessa, qubeen laatini sadi, jechuun P (p), V (v) fi Z (z) sagalee afaan Oromo isa qulqullu keessatti hin mul'atani.
Akkuma kanaa ol ilaalu dandeenyu, qubeen afaan Oromo bakka sadiitti hiramee ilaalamu danda'a.
Fkf: B C D F .......
c. Qube cimdii (double consonants) --- akka kanaa ol caqasame
Afaan Oromo keessatti sagalee tokko jabeessu fi laaffisu kan danda'amu qube dubbifamaa itti fayyadamu dhaani. Sagalee tokko jabeessuf qube dubbifamaa tokko naqa lama wallitti dhaansine katabna.
1.2.3. Hudhaa ( ' )
Sagalee afaan Oromo keessatti dubbachiiftuun lamaa ol walitti aananii hin barreeffamani. Haata'u malee garuu, bakkee afuurri cite dubbifamaan hafutti ykn bakkee dubbifamaan hin jirretti dubbachiiftuun lamaa ol yoo walitti aananii dhufan, bakkee kanatti hudhaa ( ' ) galchuun barreessama.
ta'uu (dubbachiiftuu 3)
taa'uu (dubbachiiftuu 4)
oo'u (dubbachiiftuu 3)
bu'uu (dubbachiiftuu 3)
danda'uu (dubbachiiftuu 3)
ka'uu (dubbachiiftuu 3)
kaa'uu (dubbachiiftuu 4)
- jalqabni sagalee: maqaa namaa, maqaa ummattaa, maqaa biyyaa, maqaa lafaa, maqaa baatii, maqaa guyyaa fi akkasumas
- Jalqabni dhaabii dubbii - kan tuqa (.) booddee dhufu hundumtuu qube guddaadhaan bareefamu.
1. Maqaa namaa: - Gammachu, Hirkoosa, Abdata, Caaltu k.k.f.
2. Maqaa ummattaa: - Booranaa , Karrayuu, Meecca k.k.f.
3. Maqaa biyyaa: - Oromiya, Angoola, Amerika, Jarman k.k.f.
a) maqaa tuluu: - Baattuu, Gaaraa Mul'ataa, Cilaaloo k.k.f.
b) maqaa lagaa: - Haawaash, Gannaalee, Gibee, Dhidheessa k.k.f.
c) maqaa magaalaa: - Adaamaa, Bushooftuu, Finfinnee, Ambo, Dirre Dawwa k.k.f.
d) maqaa gandaa: - Guduru, Jiddaa, Hoolota, Salaalee k.k.f.
5. Maqaa baatii (ji'a)
6. Sambata (Sambat'xinaa, Sambataduraa, Sabtii)
Dubbii jechuun yeroo tokko keessatti namni tokko akka waan tokko godhu yookaan wanni tokko akka godhamuu fi akka maal ta'u kan nutti himu walitti qabama jechootati. Walitti qabamni jechoota (dubbin) kunis hiika kan qabaatu ta'ee dubbisaa fi dhagayaa dhaaf rakko malee qajeelootti kan galu ta'uutu isa irra jira.
Dubbiin walitti qabama jechoota haata'u malee, jechootni kun garuu hiika qajeelaa kennuu dhaaf bakke qajeelaa qabatanii argamuutu isaan irra jira.
Fakkeenya kana keessa dubbii lammaffaa yoo laalle, akka jiru kanattii dubbatamuu akka danda'uu fi hiika qajeelaas akka qabu dha. Dubbiin sadaffaa akka jiru kanatti hiika qabaachuu danda'uus, afaan Oromo keessatti garuu akkanatti dubbatamuu hin danda'u. As irratti wanni yaaduu dandeenyu, jechi kan wanna godhamu yookaan hojjetamuu fi waan ta'u kan agarsiisu (Ing: verb) sun dhaabii dubbii keessatti gara jalqabaarratti akka hin galle dha.
Dubbiin tokko kutaa sadii, jechuun gootuu, godhamtuu fi gochaa san agarsiiftuu (gara fulduraatitti "goosii" jenaan), qabaachuu danda'us yeroo hundumaa kutaa sadeen kanaan turuu hin danda'u. Dubbiin tokko tokko kan godhamtuu hin qabne yookaan hin mul'ifne jiru. Kanaaf dubbii kutaa saditti otuu hin ta'in kutaa lamatti baafnee laaluun baayee barbaachisaa dha. Kutaa tokkofaan nama tokko, wanna tokko yookaan bakke tokko kan dhaabii dubbii tokko keessatti waayee tokko jedhamuufi dha (afaan Engliziitiin "subject" jedhama). Kuniis sagalee tokko yookaaniis sagaloota baayee ta'u nidanda'u. Kutaa lammafaani ammoo wanna tokko dhaabii dubbii tokko keessatti waan kutaa tokkofaan godhu yookaan ta'u kan ibsu (Ing: "predicate"). Kutaan kun goosii fi godhamtuu walitti qaba jechaa dha.
Fakkeenya kana keessa ijoolee, Jimmaa, fi abaaboon kun kutaa tokkofaa (sabjektti) dha. Kan hafan garuu kutaa lammafaa (predikaatii) dha. Amma erga baranne booda gara funduraatitti kutaa dubbii kana "sabjektti" fi "predikaatii" yoo jennee dubbanne rakko fida miti.
Dubbiin kun wanna godhamu, hojjetamu fi ta'u kan agarsiisu jechaa dha. Dubbiin kun dubbii "ganuu" fi "eeyinaa" ta'u nidanda'a. Fkf. Gammadaan nama gaarii dha. (eeyina) Adureen hantuuta qabde. (eeyina) Inni boru hin dhufu. (ganuu) Ishiin bareedu miti. (ganuu)
Haata'u malee dubbii akka xineenya, guddinaa fi ulfina isaatitti yookaan akka baayyina kutaa isaatitti (predikaatii) gara saditti hiruus nidandeenya.
2. Dubbii guddaa (dheeraa) Dubbii guddaa (dheeraa) kan jennu dubbii lama yookaan dubbii lamaa oli sagaloota biraatiin walitti finee akka dubbii tokko goonee yoo dubbanu yokaaniis bareessinu jechaa dha. Sagaloonni walittifidduun kun fakkeenyaaf kan akka "garuu", "haata'u malee" fi kan kana fakkaatani
Fkf. Gammadaan deemee ture. Gammadaan deebi'uu hin dhiisu.
Dubbiin kun lamaan dubbii garagaraa ti. Dubbii kana lamaan walitti finee dubbi tokko yoo goone "dubbii guddaa" ta'a.
Fkf. Gammadaan deemee ture, garuu deebi'uu hin dhiisu. Gammadaan deemee ture, haata'u malee deebi'uu hin dhiisu.
3. Dubbii ulfaataa Dubbii ulfaataa kan jennu moo dubbii predikaatii lama yookaan lamaa ol qabu dha. Dubbiin kun dubbii of hin dandeenye (kutamadubbii) fi dubbii ofdanda'aa ofkeesaa qaba.
Fkf. a) Ani ishii harra argeen ture. (dubbii of danda'aa)
b) Ishii kan kaleesa dhuftee turte, (dubbii of hin dandeenye, kutamadubbii) c) Ishiin afaan Oromo sirriitti dubbatti. (dubbii of danda'aa) Dubbii kana sadeen walitti finee dubbii tokko yoo dhaabne, dubbii kanaan dubbii ulfaataa jenaani.
Fkf. Ani ishii, kan kaleesa dhuftee turte, kan afaan Oromo sirriitti dubbatu san, harr'a argeen ture. (dubbii ulfaataa)
Kutama dubbii (dubbii of hin dandeenye) kan jennu dubbii waan tokko akka godhamu yookaan akka ta'u sirriitti qajeelchee nutti himuu kan hin dandeenye jechaa dha. Dubbiin kun goosii ofkeesaa qabaachuu yoo danda'es akka dhaabii isaatitti hiika guutuu kennuu kan hin dandeenye dha. Akkana jechuun dubbii kana keessatti wanni tokko godhamuu fi ta'uun isaa mullatus wanni sun godhamee yookaan ta'e akka hin argamin hubanna jechuu dha.
Fkf. Ishiin Caaltuu jedhamti. (dubbii of danda'aa) Ishiin bareedun sun,...(dubbii of hin dandeenye) Ishiin kan afaan Oromo sirriitti dubbatu sun,... (dubbii of hin dandeenye)
Dubbii of hin dandeenye (kutamadubbii) fi dubbii of danda'aa walitti finee dubbii tokko yoo goone, dubbiin dhaabbatu sun dubbii ulfaataa ta'a jechaa dha.
Fakkeenya gara biraa kutamadubbiidhaaf: Inni kan barsiisu sun,..... Otuu akka nubarbaanu ta'e,.... Yoo yeroo qabaate,.... Yoo boru kan dhuftu ta'e,... fi k.k.f
Fkf. Ani sin eega. (dubbii ofdanda'aa) Yoo daftee kan deebitu ta'e,....(kutamadubbii) Yoo daftee kan deebitu ta'e, sin eega. Ani sin eega, yoo daftee kan deebitu ta'e. Dubbiin lamaan gara dhumarraa dhaabii dubbii ulfaataa ti. Hiikasaa yoo laale wulii agarsiisa. Waayee wulii gara funduraatitti laala.
Maqaa mul'iftuu (Adj.)
Maqamul'iftuu kan jennu jecha dhaabii dubbii keessatti maqaatti dabalamee hiika isaa kan ibsu dha.
Fakkeenya kana keessa "xiqqoo" fi "dheeraa"n maqamul'iftoota. Intalli fi gurbaan sun nama akkamii akka ta'aan hiika isaanii ibsu.
Goosiin jecha waan tokko akka godhamu, godhame, ta'u fi ta'e yookaaniis akka namni tokko waan tokko godhu kan nutti himu.
Dabalgoosiini immoo akkuma maqaan isaa ibsu, jecha kan hiika goosii, hiika maqamul'iftuu fi akkasumas hiika jechoota biraa agarsiisuudhaaf galani dha.
Fakkeenya kana keessa "gaaritti" fi " heddu"n dabalgoosota.
Naanoo kan jennuu jecha kan jechoota biraatti naana'ee yookaan maxxanee dhaabii dubbii keessatti walittifirooma isaanii kan agarsiisu.
Fakkeenya kana keessa "gara" fi "-tii"n naanoota.
Inni gara Finfinee deeme, garuu iftaan deebi'uun isa hin oolu.
Isheen biyya alaa jirti, haata'u malee dhufuun ishee hin haafu.
Fakkeenya kana keessatti "fi", "garuu" fi "haata'u malee"n walittifiddota.
Fkf.. Ishoo! Maaloo...! Dhiisiboo...! fi kkf
4. Maqaa mi'aa
Maqaa hundagayiin maqaa nuy namoota sanyiin isaanii tokko ta'e yookaan kan firooma waliraa qaban akkasumas wanna gara biraa bifaa fi jireenyaan kan walfakkaatan hundaaf kan kenninu dha.
Maqaa walittiqabamaa kan jedhamu maqaa walgayii namaa fi walgayii waan biraa bakke tokkotti laalamuu dha. Asirratti walgayii yoo jennu yeroo tokko keessa kophaa walitti dhufamee kan bakke tokko taa'u otuu hin ta'in, jireenyumti isaatuu walgayii kan ta'e jechaa dha.
3.1.1.4. Maqaa Mi'aa
Maqaa mi'aa kan jennu maqaa mi'a garagaraa ti. Miini kan namni waan tokko
ittin hojjetu yookaan waan biraa irraa hojechuu kan danda'u dha.
Warrii hin qabamne kan jennu warra ta'asaanii yookaan gochaa- fi
lubbu qabaatanii jiraatan akka lamatti jiraachuu danda'an. Kuniis akka
dhalchaa yookaan akka dhaltuu ti. Ilmaan namootaatiin garuu "dhiiraa" fi
"dubartii" yoo jennu warra kaaniin kormaa fi dhaltuu jechuus nidandeenya.
Aduun ba'e. (akka dhalchaa)
kanaa olitti ibssametti "aduu" akka lachittuu laaluu akka dandeenyu dha.
3.1.2.2. Uumama Maqaa Maqamul'iftuu
Maqaa warra hin qabamnee maqamul'iftu irratti "-eenya", "-ina", "-ummaa",
"-uma" yookaan "-ooma" dabalee uumuu nidandeenya.
Fakk. maqamul'iftuu maqaa warra hin qabamnee
uumamuu nidanda'a. Akkaataa garagaraa kana keessaa akkaataa beekkamaan uumama
mul'is- mul'isaa mul'iftuu fi k.k.f.
hojjaa isaan agarsiisanitti namaafiis dhaabbachuu yoo danda'anis akka maqaa
dha jennee meeqa akka ta'e agarsiisuudhaaf kan dubbanu jechaa dha. Haata'u
isaatitti otuu hin ta'in barnoota afaanii keessatti gara gurguddaa lamatti
hirra. Isaan lamaan kun - tokkee fi
- baayee dha.
1. dhuma maqaa tokkeerra dubbachiiftuu gatanii bakkee kanatt "-ota" yookaan
"-oota" daabalanii kan uumaman
Haata'u malee seerii kun yeroo hundaa maqaa hundumaafuu hin hojjeta jechuu
2. akkasumas "-olii" yookaan "-olee" tokkeetti dabalanii kan uumamanis jiru
miti. Akaataan biraatiis jiraachuu hin danda'a.
sa'a saawaa fi k.k.f.
Maqaa hin lakkaawamne kan jennu moo maqoota baayina isaanii ammam amma ta'an
garagaraa agarsiisu nidanda'a.
Horrin bobba'ani jiru.
Fakkeenya kana keessatti maqoonni kun gochaa yookaan ta'umsa waan tokkoo
3. Maqaa akka maqamul'iftuutitti galee qabeenya kan agarsiisu
Fakk. mana - nama mana namaa
qaawwa - balbala qaawwa balbalaa
ilma - nama ilma namaa
kottee - bineensa kottee bineensaa fi k.k.f.
bineensaa ta'uun isaanii waan beekkamuuf jechaa dha.
Dubbii kana laman yoo laale "mana namaa" dhaabii dubbii duraa keessatti akka
godhamtuu kan lammata keessatti akka gootuu (sabjektti) ta'u isaa nihubanna.
Asirratti "mana namaa" yoo jennu namni qabaa yookaan abboomaa, manni moo
qabamaa ta'u isaanii hubbachuu nidandeenya. Afaan Oromoo keessatti maqaa
Akka kanaa olitti laalametti "mana namaa" dhaabii dubbii sadeen keessatti
otuu of hin jijjirin gale. Gootuu yookaan godhamtuu ta'usaa beekuu kan
dandeenyu hiika dubbii kana irraa dha. Haata'u malee maqoonni akka gootuu
yookaan godhamtuu ta'anii dhaabii dubbii keessatti galan, maal akka ta'an
ta'u nutti hima. Kanaaf maqoonni akka gootuu ta'ani yoo galan akka seera
1. maqoota kan dhuma isaanititti "-n" dabalanii jijjiraman
2. maqoonni tokko tokko dubbachiiftuu dhumarraa gatani "-ni"
3. maqoonni tokko tokko ammoo dhumasaanii jijjirani kan "-ti"
4. Maqoonni dhumarraa dubbachiiftuu gatani bakkee kanatti "-i" kan
5. maqoonni dhumnisaanii "-n" ta'an otuu hin jijjiramin akkuma
yoo ta'e ammoo akkuma jiranitti galan jechaa dha.
a. Maqamul'iftuun yoo maqaa wajjin dhufte, akkasumas beeksiisa
- godhamtuu sirrii fi
- godhamtuu sirrii hin taane dha.
Godhamtuu sirrii kan jennu godhamtuu ofdanda'ee dhaabii dubbii keessa kan
jiraatu yookaan kan ifatti mul'atu jechaa dha. Gochaa gootuurraa dhufu san
sirritti fudhatee waan ta'u yookaan waan godhamu san ifatti mul'isa. Gaafii
maal tu maal ta'e? maal tu maal godhe? maal tu maal godhame? yookaanis ammoo
eenyu tu maal ta'e? ... maal godhe? kan jedhuuf deebisa sirrii kan kennu dha.
Fakkeenya kana keessa "fardi", "hoolaa" fi "gaazexaa"n godhamtuu sirrii ti.
Gochaa ta'e sana jechuun asitti "bitama", "qalama" fi "dubifama" gootuu
Godhamtuu sirri hin taane dhaabii dubbii keessatti ofdanda'e hiika guutuu
- waan tokkotti waa akka godhamu
- waan tokkoof waa akka godhamu
- waan tokkoon waa akka godhamu dha.
Fakk. Badhaasaan okaa fe'e (godhamtuu sirrii)
Badhaasaan harreetti okaa fe'e. (godhamtuu naanoo)
Asirratti "Badhaasaan harreetti fe'e." jenne yoo dubbanne, dubbiin kun
ofdanda'e hiika guutuu hin kennu. Wanni tokko harreetti akka fe'amu hima
malee wanni fe'ame sun sirritti ifatti baye hin mul'ane. Harreen godhamtuu
sirrii okaa dha yookaan "Badhaasaan harreetti fe'e" yoo jenne godhamtuun
sirrii harree otuu hinta'in isa waan harreetti fe'ame sana.